र अब खुसी घटना भयो। तपाईं त प्रिय हतियार तपाईं ruches संग कंबल मा र्याप आनन्द को गांठ clutching, उनको घर को सीमा मा खडा छन्। तिनीहरूले पर्खने, पीडादायी श्रम र वितरण, आनन्दित हल्ला नौ गाह्रो महिना छोडेर छुट्टी अस्पताल बाट। आफ्नो टाउको मा बिस्तारै विचार र सल्लाह प्राप्त प्याक गर्न सुरु र चिकित्सा कर्मियों द्वारा, र हजुरआमा र aunts देखि। पहिलो पटक, जवान आमाबाबुले चोट, उसलाई चोट डर, उनको नवजात बच्चालाई भेट्नुपर्छ गर्न डराउँछन्। तिनीहरूलाई जोडले प्रश्न उठ्छ अघि किन छ: "को नवजात नाइटो को प्रक्रिया।" चिकित्सकको हेरविचार अन्तर्गत यो एकदम सरल प्रक्रिया कुनै पनि समस्या उत्पन्न भएन छ, तर एक्लै छोडेर आमाबाबुले आतंक गर्न थाल्छन्। एक नवजात नाइटो संक्रमण र गति निको प्राप्त रोक्न लागि कसरी ख्याल गर्ने?
नाइटो प्रक्रिया नवजात
को प्रश्न गर्न नजिकिंदै को नवजात को नाइटो के प्रक्रिया, निरन्तर परिवर्तन हुँदैछन्। हालसालै, neonatologists - एक महिना छोराछोरीलाई अप हेर्दै डाक्टर, रक्सी आधारित समाधान (Zelenko, वा आयोडिन) संग घाउ ह्यान्डल गर्न सल्लाह थियो। आज चिकित्सा सल्लाह दिन्छन्: को नवजात को नाइटो प्रशोधन अघि, यो बच्चा हावा स्नान व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। यो umbilical घाउ लागि, तर पनि सारा जीव लागि मात्र होइन उपयोगी छ। बारम्बार हावा स्नान chafing र potnichki जोगिन मदत। को नाइटो को उपचार सुत्नेसमय अघि साँझ बनाउन राम्रो छ। आफ्नो बच्चा नुहाउने गर्न पूर्व-आवश्यकता। पानी जस्तै chamomile र कैलेंडुला रूपमा जडीबुटी को decoctions थप्नुहोस्। स्नान पछि, उपचार गर्न अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ पोटासियम Permanganate को समाधान वा Zelenka। तपाईं नाइटो सम्हाल्न अघि नवजात डाटा मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड संग घाउ कुल्ला। अर्को, एक कपास swab पोटासियम Permanganate वा हरियो रंग को prizhgite pupochek बच्चा गाढा समाधान छ। को गर्भनाल बस गिर सुरु हुँदैछ जहाँ ठाउँमा विशेष ध्यान: यो समाधान कुनै पनि मामला मा यो आफैलाई आंसू गर्न असम्भव छ, जबकि, एक गर्भनाल सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो आएको धेरै महत्त्वपूर्ण छ। संदेह छैन, नाइटो नवजात उपचार गर्न भन्दा, के रोज्ने - वा पोटासियम Zelenka Permanganate? को लागि कुरा उल्लेख स्वास्थ्य आगन्तुक वा प्राथमिक हेरविचार बाल विशेषज्ञ। तिनीहरूले सही छनौट गर्न मद्दत गर्छ।
नवजात हेरविचार लागि सामान्य सिफारिसहरू
नवजात हेरविचार एकदम सरल छ, हरेक आमा intuitively उनको बच्चा कुनै पनि क्षण मा के आवश्यक महसुस। तर, नयाँ परिवार सदस्य परिचित युवा आमाबाबुले मदत गर्न सामान्य सिफारिसहरू एक नम्बर:
डायपर। आफ्नो बच्चाको डायपर को निवास समय कम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। निस्सन्देह, राति र पैदल डायपर मा - पूर्ण बेबदल दिन केही, तर बच्चा उहाँलाई बिना बन्द राम्रो हुनेछ। सबै पछि, प्रजनन प्रणाली को सामान्य विकासको लागि बच्चाहरु को जनन (विशेष गरी केटाहरू), र शरीर को तापमान सुक्खा डायपर मा, आधा शरीर तापमान माथि डिग्री-डिग्री गरम करना गर्न सक्दैन। बच्चालाई पिशाब पछि, तापमान अर्को डिग्री द्वारा rises।
छाला हेरविचार सरल छ। यो कुनै डायपर दाना र Folds मा सानो चर्किएको थियो भन्ने सुनिश्चित गर्न पर्याप्त छ। यस्तो समस्या हुन्छ भने, चिन्ता छैन। क्षतिग्रस्त छाला विशेष व्यवहार chafing देखि मलम (यो अस्पताल सिफारिश गर्नेछ)।
कान, नाक र आँखा हेरचाह गर्न, एक विशेष छोराछोरीको कपास swabs, बाँझ कपास tamponchiki, turundochki प्रयोग गर्नुहोस्। सबै न्यानो उसिनेर पानी सफा।
अर्को किंडरगार्टन गर्न बच्चा स्थानान्तरण गर्न कसरी सिफारिसहरू
सिद्धान्त र अभ्यास: जब एक बच्चा कुरा गर्न सुरु
के मैले आफ्नो आमाको कुखुराको मासु पिउन सक्छु? सिफारिसहरू र सल्लाह
Miusskaya मुहाना: वर्णन, सुविधाहरू, आकर्षण र रोचक तथ्य
शिकागो समूह रचनात्मकता को सुविधाहरू
थिएटर निर्देशक बेन्जामिन Skalník र अभिनेत्री Anastasia Nemolyaeva: जीवनी, रचनात्मकता
चिकन संग अनाज सूप - सम्पूर्ण परिवारको लागि उत्कृष्ट भोजन